izimpahla ekhangayo efasiteleni - nesidingo ayisihluthulelo esitolo inqwaba abathengi ukwazi. Ngokusekelwe izindikimba kanye uhla imikhiqizo ahlinzekwa, kufanele ukhethe kanye nomklamo ohlangothini lomgwaqo izitolo. Yiziphi imithetho yokubhalisa kukhona nenzuzo kakhulu sizisebenzise?
kwesitolo. imithetho Jikelele
Kuleso simo, uma umdayisi banganikeza izimpahla kumthengi abakhiqizi eziningana owaziwa, kungcono ukuhlela iwindi imikhiqizo kakhulu esinegama, okuyinto ethulwa esitolo anhlobonhlobo. Iwindi imikhiqizo sigqoka, okuyinto akuzona ethandwa noma ayetfulwanga amasayizi ethandwa kakhulu, kungaba imbangela nokuncipha kwenani izivakashi, ngakho umthengi akusho wanelisa isidingo sakho ukuthenga izimpahla kwesokudla kuye sinye, akunakwenzeka ukuya phansi esitolo efanayo futhi. izimpahla embukisweni kumelwe kuvumelane wezangaphakathi jikelele ibonisa uqobo futhi uhla yayo imibala futhi zivuse imizwelo eyakhayo futhi athokozise abathengi ezingaba khona.
Kwesitolo zesitezi ephakeme
Iningi kukhanga abathengi izimpahla e amafasitela esitezi sokuqala, ngakho izivakashi angabuka isiphakamiso ngokuningiliziwe. Uma ifasitela elingakwesobunxele itholakala ngenhla nehlo (phansi 2nd nokuningi), kubalulekile ukusebenzisa amanye amasu ukuheha abathengi. Omunye wabo nokwanda ubukhulu imikhiqizo ahlinzekwa, kungenziwa ngokukhipha izakhiwo ezinkulu izimpahla ithengiswe, kanye iwindi sigqoka ngesithombe nesithombe esikhulu imikhiqizo.
Kulezi amafasitela kungcono ukusebenzisa esiphezulu ingilazi ndawo, zisebenzisa ngokucace nakakhulu nemibala "fun", ticabange ukuqhathanisa nezinye izinsimbi okungezona ezijwayelekile. Iwindi ukugqoka phezu izitezi zezakhiwo nzima yokuthi ulwazi kufanele yaziswe umthengi (ubukhulu kanye nesikhathi isaphulelo, Izipesheli nokunye. D.), Kuyadingeka ukwaba ikakhulukazi. isixazululo Good kusiza le nkinga wakwazi ukukhonza njengephayona ekushayweni ukukhanya.
Akukho imfihlo ukuthi noma yimuphi umkhiqizo Libukeka oholela kangcono uma kungenziwanga elenga isiphanyeko noma walala phezu counter, futhi begqoke ku udoli. Umthengisi, edalula dummy ewindini, kungase ukuxazulula ezinye zezinkinga zazo. Okokuqala, inhlanganisela ngempumelelo izinto angakwazi ukudayisa umkhiqizo, okuyinto uhlala engaphiwanga isikhathi eside namanga eside kakhulu emashalofini. Okwesibili, lapho bangathengisa isethi egcwele izinto eziningana izingubo yethulwa udoli, t. Ukuze. Abathengi ngokuvamile bathenge izimpahla ezivela amafasitela. Okwesithathu, phezu udoli ungakwazi nilethe onobuhle okukhethekile futhi kuyabiza ndawonye yegama lomkhiqizo. Uma izintengo elixutshwe yethulwa mannequins umkhiqizo, kunethuba elikhulu kakhulu ukuthi kahle uzothengisela umfuziselo ezibizayo. Kulo mBhalo, ukuheha abathengi kungenziwa kulekelelwa izesekeli ezihlukahlukene mannequins, izicathulo, ubucwebe, nokunye. D.
Lokhu kuthutha ibhizinisi ngeke ukuheha izivakashi ezingaphezu esitolo, kumnandi kakhulu ukubheka udoli, okuyinto ufana ntu nje indoda ethanda plastic, kepha efaniswe nomzimba womuntu ngaphandle ikhanda, izingalo nemilenze. amafasitela Ukuhlobisa esitolo ukuthengisa izicathulo nezimpahla zokugqoka, kufanele kube njengoba ligxilile nezenzakalo zokuphila ikhasimende. Kungaba romantic ukufakwa 2 "kufa" mannequins etafuleni endaweni cafe. Noma "umndeni" idyll ku ski resort, lapho abazali bafundise izinyane ukuma ngezinto zokushibilika eqhweni. Fantasy Alinamkhawulo lapha.
Umdlalo yokukhanya lapho ekhetha design
Sokuthuthwa kwempahla computer eseyi, kanye zonke izinhlobo ukukhanyisa izixazululo, inkinga amehlo amakhasimende 'ukuze ukuveza unqabile ngokuphawulekayo.
Kabanzi LED ukukhanyisa Imininingwane izingxenye ibonisa. Umdlalo yokukhanya kungaba nenzuzo ukuhlukanisa izakhi ngabanye noma izinto okuyiwona umdayisi ufuna ukukhokha lemali ukubukwa yabathengi. Design ukuveza kule ekhemisi uvame ukuhambisana i kwasemuva LED, kusukela imvelo imikhiqizo adayiswa akusho Ukukhetha enkulu inhlanganisela ukuheha abathengi kuhilelani.
abathengisi abaningi basebenzisa backlight futhi kukhanyisa iwindi sigqoka ebumnyameni, naphezu kweqiniso lokuthi esitolo ayisebenzi ngalesi sikhathi. Ukuhamba esidlule efasiteleni, umthengi ngokuqinisekile banake it, liletha imizwelo eyakhayo futhi uyasijabulisa isifiso ukuya esitolo ngezikhathi zokusebenza zebhizinisi.
Iwindi ukugqoka nge avelele ezahlukene, yebo, kudala izindleko ezengeziwe zezimali ngoba umdayisi, kodwa zonke ngamaholide uthando futhi isimo kaKhisimusi. Futhi lokhu "nenhle" ibonisa njalo kwenza ukuthi umuntu celebration, futhi isifiso sokuba ukuthenga ngaye.
A ezingaba umthengi esitolo sakho
Umdayisi kufanele bazi lapho isigaba sitjheja umthengi, uyazi funa yakhe umkhiqizo ukuthi ufuna ukunikela. Umbukiso kufanele kwenzeke ukuba kubonise zonke ngokucacile kwezimpahla ithengiswe futhi ubonise wonke esandleni sakhe ngokuwina. Umthengi, kusukela amafasitela kumele uqiniseke ukuthi lesi sitolo ukuzuza isithakazelo umkhiqizo wawo ngentengo kuhle ke.
Ukuveza setfulo kufanele njalo olusha, njengoba izithakazelo abathengi zihlukile, futhi ngezibuyekezo njalo amawindi nethuba ukuheha uyikhasimende elitsha futhi, ngokufanelekile, ukuthola izinzuzo okukhulu. Uma wesitolo lide, ungakha eziningana nemibukiso ahlukene ngezihloko ezihlukahlukene ukuthi ukwanelisa Ukuthanda lwezigaba ezahlukene abathengi.
Kulokhu, umthengisi uzokwazi bakhombise nobungako obungaphezulu kanye Umbukiso zoned ngokuphepha ukuze uthole olunye ulwazi kanye embukisweni izicucu.
Izinto ezenziwa abantu
Esikhathini sethu, lapho beya noma iliphi idolobha dazzled ngenani kwesitolo elithakazelisayo ezimibalabala. Akuwona wonke umnikazi esitolo ingakwazi ukudala wobuciko ukuthi kuyobonakala ngelinye iso yabathengi. Ngakho-ke, bonke abathengisi ngokuya bathembele iwindi ukugqoka esitolo sabo ochwepheshe. Kodwa lokhu akuyona into engenakwenzeka isiqinisekiso kwandziswa kwelinani letikhungo abathengi.
Ngemva kokudala ubuso esitolo sakhe kuyadingeka ukuqapha futhi amnakekele. umthengi Ukhetho akangeni esitolo, uma indlela abukeka ngayo icala kukhona iminonjana iminwe kothile noma uthuli ezisemagumbini. Ngenxa enifeza yokuhlanza kanye nokulondoloza ubumsulwa njalo kuzoqinisekisa ukuthi abedlula ngendlela kanti izinga enviable bayokuhlola esitolo. Ukuheha abathengi, ungafaka i-windows isithombe esitolo, umhlobiso okuyinto kwenziwa ngokuvumelana nemithetho, kule khulula izincwajana komuzi.
Ngenkathi mega-imizi kanye nokuntuleka eyinhlekelele izikhala green ezindaweni ezisemadolobheni, kuyinto yiziphazamiso ezihehayo kakhulu ukubukeka ukuveza ehlotshiswe izitshalo lwentshebe nezimbali zokuhlobisa. Ngisho noma isivakashi Asingeni esitolo uhlela ukuthenga izinto ezintsha, iyiphi abathandi bemvelo izinto zokuzilibazisa ngeke ufuna ukuvakashela oasis-like futhi angabukeka ngemva ngokwakho okuthile esikhathini esizayo.
Ukushayela kwezindlela Cold: indlela ukufezekisa yalokho
"Theraflu": Umhlahlandlela, ukubuyekezwa, intengo. Yini esikhundleni "Theraflu": nozakwabo eshibhile futhi kangcono
Indlela Yokukhetha Imoto?